काठमाडौं । भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसीस विङ (रअ)का प्रमूख सामन्त गोयल काठमाडौंमा उच्च तहको भेटघाट गरी फर्किएको बारे निक्कै चार्च र चासो मात्र होइन विवाद नै भयो। सो विवाद सेलाउन नपाउँदै भारतीय संस्थापनका सांसद हिन्दूत्वको नारा बोकेर सुटुक्क बालुवाटार छिरेका छन्।
नेपालको संविधान विपरितका चाहना बोकेर गुप्तचर प्रमूख र भारतीय संस्थापनका नेता बालुवाटार, खुमलटार, बुढानिलकण्ठतिर छिर्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ।
कूटनीतिकरूपमा आएका पाहुनाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सत्तारुढ पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतलाई भेटेर नेपाल हिन्दूराज्य बन्नुपर्छ भनी सुझाव दिएको बताइएको छ। ‘नेपाललाई संविधान संशोधन गरेर हिन्दूराज्य घोषणा गर्नका लागि भारतीय अधिकारीले सुझाव दिएका छन्, प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त सुझाव सुन्नुभएको छ’, बालुवाटार उच्च स्रोतले भन्यो,‘यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले बुझेर धारणा दिने बताउनुभएको छ।’
सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका प्रभावशाली नेता तथा राज्यसभा सांसद डा. सुब्रमण्यम स्वामीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेका हुन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका अति निकट मानिने स्वामीले नेपाललाई हिन्दूराज्य घोषणा गरी विश्वमा नै सबै हिन्दूवादीलाई खुशी बनाउनका लागि सुझाव दिएको स्रोतले बताएको छ। यसअघि रअ प्रमूख गोयलले पनि हिन्दूत्वका विषयमा गम्भिरताका साथ सोचेर अघि बढ्नका लागि ओलीलाई सुझाव दिएका थिए।
स्वामीले भने आफु विश्व हिन्दू महासंघ र विश्व हिन्दू परिषद्को कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि काठमाडौं आएको बताएका थिए। गोयल फर्कनासाथ स्वामी नेपाल किन छिरे? यो प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता भेटेर स्वामीले नेपाललाई विश्वमा एकमात्र हिन्दू राज्यको परिचय दिलाउन सुझाव दिएका थिए। नेपालमा भारतीय जनता पार्टीले हिन्दू राज्य बनाउनका लागि ठूलो लगानी गरेको आरोप पश्चिमा मुलूकले लगाउँदै आएका छन्। यसबारे पछिल्लो समय अमेरिकाको सरकारी प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरिएको थियो।
युरोपियन युनियन, अमेरिका लगायतका मुलुकले नेपालमा क्रिश्चियन धर्म फैलावटका लागि लगानी बढाएको आरोप यसअघिदेखिनै आइरहेका छन्। त्यसो त अमेरिकाको प्रतिवेदन भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले नेपाललाई विश्वमै एक मात्र हिन्दू मुलूक बनाउनुपर्ने अभिव्यक्तिपछि सार्वजनिक भएको थियो। आदित्यनाथले त नेपालमा राजसंस्था पनि अनिवार्य भएको धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन्।
एम्बुस १ –हिन्दू नभए, संविधान नोटिस मात्रैः
नेपालको संविधानलाई भारतीय प्रशासनले नोटिसमात्र गरेको छ। उसले उक्त संविधानमा हिन्दू राज्य भनी लेख्नका लागि दबाब दिएको थियो। भर्खरै काठमाडौं छिरेका रअ प्रमूख गोयलले पनि नेपालको संविधानमा हिन्दू लेखिए भारत सरकारले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने र स्वागत गर्ने बताएको उच्च स्रोतको दाबी छ। संविधान निर्माण ताका तत्कालीन विदेश सचिव तथा हालका भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर पनि सोही सन्देश बोकेर काठमाडौं आएका थिए।
तर, तत्कालीन अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिन्दूत्व राख्न नसकिने बताएपछि नेपालमा भारतले नाकाबन्दी गरेको आंकलन गरिएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसहित उच्च पदस्थले नेपाललाई सांकेतिकरूपमा धार्मिक गन्तव्यका रूपमा नै लिने गरेका छन्। त्यसैले मोदीका यसअघिका चार वटा भ्रमण पनि धार्मिक हिसाबले नै केन्द्रविन्दुमा रहेको थियो।
मोदीले पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, जनकपुरधाम लगायतको विशिष्ट भ्रमण गरेका थिए। यस्तै उनीवाहेकका अधिकारीको भ्रमण पनि सोही हिसाबले हुँदै आएको छ। गोयलले पनि सोमबारको दिन पारेर पशुपतिनाथको दर्शन गरे भने स्वामीले पनि शनिबार पशुपतिको दर्शन गरी फर्किएका थिए।
एम्बुस २ –राजावादीसँग साँठगाँठः
नेपालमा राजसंस्था पुनस्र्थापना र हिन्दूत्व हुनुपर्छ भन्ने गैर राजनीतिक संस्थालाई भाजपाले सहयोग गरेको खुलेको छ। भारतीय संस्थापनमार्फत नेपालस्थित भारतीय दूतावासले सहजीकरण गरेका कारण विश्व हिन्दू महासंघले धार्मिक कार्यक्रम गरिरहेको छ। यस्तै धार्मिक संघ–संस्थालाई दूतावासले सहयोगमा तिव्रता दिएको छ। हिन्दूत्वका लागि काम गर्ने केही संस्थालाई अफिसियलरुपमा नै सहयोग गर्दै आउनुमा भारतीय संस्थापनको इच्छा देखिन्छ।
‘धार्मिक कार्यक्रम र राजनीतिक दलमा यसको बहस चले नेपाललाई आफूले भनेको विन्दुमा पु¥याउन सक्ने भाजपाको बुझाई छ’, स्रोतले भन्यो,‘भारतीय प्रधानमन्त्रीको सुझावका आधारमा नै नेपालमा यस्तो गतिविधिले तिव्रता पाएको हो।’ यहाँसम्मकी भारतसँग चीनको नयाँ सम्बन्ध कायम भएको हुनाले हिन्दूत्वको घोषणामा चीनलाई पनि सहमतीमा ल्याउन सकिने उनीहरूले आश्वासन दिँदै आएका छन्।
तर, भनिन्छ नेपाली नेतालाई पश्चिमाको डर रहेको छ।